Mogadishu Journal » Lemma oo diiday qorshaha abuurista hal Xisbi siyaasadeed
Mjournal :-Wasiirka Difaaca ee Ethiopia oo aad ugu dhowaa Ra’isulwasaare Abiy Ahmed, ayaa dhaleeceeyey qorshaha loogu bedelayo Isbahaysigii EPRDF ee Itoobiya maamulayay xisbi qura, taasi oo muujineysa kala qeybsanaan ka hor doorashada qorsheysan in la qabto sanadka danbe ee 2020-ka.
Wareysi ay laanta Oromo-da la hadasha ee VOA la yeelatay habeenkii Jimcaha ayuu Wasiirka Difaaca ee Ethiopia Lemma Megersa ku dhaleeceeyey tallaabada looga guurayo isbahaysiga qowmiyadaha ku saleysan ee waddankaasi soo maamulayay muddo soddon sano ka badan.
Aby oo haysta abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa qorshihiisa ah in isbahaysiga EPRDF laga guuro oo loo guuro xisbi kali ah waxaa ka soo horjeestay Xisbiga Xoreynta Tegrayan ee TPLF, kaasi oo ahaa xisbi aad u awood badan waqtigii uu talinayay hogaamiyihii geeriyooday Meles Zenawi.
Falanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in kala qeybsanaanta banaanka usoo baxday ee u dhaxeysa siyaasiyiinta ugu miisaanka culus dalka ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromo ay soo kordhin karto hubanti la’aanta siyaasadeed ee doorashada bisha May ee sanadka danbe la qorsheeyey ayna dhaawacayso ajnadaha dib u qaabeynta dalkaasi ee uu wado Ra’isulwasaare Aby Axmed.
Lemma ayaa hore usoo noqday madaxweynaha gobolka ugu ballaaran uguna dadka badan ee Oromia.
Aby Axmed oo laftiisu ka soo jeeda qowmiyadda Oromo ayaa awoodda dalka la wareegay bishii April ee 2018-kii ka dib banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeday oo qowmiyadaha Oromo iyo Amhara ay halkaasi ka wadeen muddo laba sano ah.
Puntland oo heshiis la saxiixatay Shirkad Shiinees ah